Sida loo Play MKV on Samsung TV Si fudud
Samsung TV ciyaari karaa files MKV ah? Marka aad isku dayaan in ay sameeyaan, aad TV laga yaabaa in uu diido in uu u ciyaaro qaar ka mid ah files MKV, kuwaas oo lagu fariin qalad codec audio aan waxtarka lahayn xaq u soo bandhigeen aad shaashadda. Haddii ay sidaas tahay, waxaad u baahan doontaa si loogu badalo files MKV in ay qaab si buuxda u la jaan TV Samsung. Halkan Fiiri xalka.
MKV waa kaliya qaab weel, haysta video, audio, image ama faylasha Cinwaan waxa ku jira. The video iyo files audio ee files MKV kala duwan la encoded karaa codecs kala duwan. Tusaale ahaan, file MKV la DTS audio aan loo abaalgudi karto TV Samsung. MKV A xirfadle in Samsung Converter TV kuu ogolaanaysaa inaad badalo wax files MKV ugu fiican ee ku haboon TV. Waa Wondershare ku Video Converter .
Sidaa daraadeed, ma aha in aad u baahan tahay in aad ogaato waxa codec codka qaab MKV in ay noqon doontaa sida ugu fiican ee aad TV Samsung. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ah presets filaayo in Samsung TV oo barnaamijkan samayn doonaa inta kale ee aad u. Halka A ka dib, diinta video inuu kusoo dhamaan doono oo aad noqon doontaa si aad u daawato content warbaahinta laga cabsado ee Samsung TV oo aan haysan si ay wax u dhimayaan tayada awoodaan.
Just download, rakibi iyo bilowno weyn Samsung TV video Converter ka dibna raaci tutorial ay ku ciyaaraan file MKV ku saabsan Samsung TV habsami leh.
Barnaamijkan waxaad bixisaa laba siyaabood sooc inay geliyaan files MKV aad. Waxaad sidoo kale riixi kartaa ka button xitaa aad disk adag ama tusaha maxalliga ah iyo shuban files bartilmaameedka ama si fudud u jiidi aad videos MKV deegaanka gal interface ka. The files uploaded la soo bandhigi doonaa sida thumbnails.
2 Dooro qaabka filaayo in TV Samsung
Hit ah Forma Output t hoos-hoos menu oo taga si Device> telefishin in ay doortaan Samsung TV sidii qaab wax soo saarka. The filaayo in qaab saarka doonistiisa ku jira ugu fiican video goobaha loogu talagalay loo maqli on your TV Samsung.
3 MKV Play on TV Samsung
Guji ka badalo button rukun-xaq u hooseysa interface ah si loogu badalo file MKV in aad TV Samsung. Tani Converter Video dhameysan doono MKV in ay diinta ka Samsung TV in dhawr miridh.
Ka dib markii diinta, kuu soo gudbin karaan dhamaan faylasha wax soo saarka si ay u drive USB ah oo ka dibna u ciyaaro Samsung TV via cable USB ah.
> Resource > Video > Sida loo Play MKV on Samsung TV